Saraakiil Booliska Soomaaliyeed oo loo Tababaray Siday Xirfadaha Cusub ugu Gudbin lahaayeen Saxibahooda kale – EUCAP Somalia
Sagaal sarkaal oo ka kala socda ciidamadda booliska Soomaaliya, ayaa ka qaybgalay tababarka-tababarayaasha, duruus socotay 24 ilaa 30 bishii Maarso, tababarkan ayaa waxa soo qabanqaabiyey unugta la taliyeyaasha Booliska ee Hay’adda EUCAP Somalia, iskana kaashaday hawlgalka Midowga Afrika ee Muqdisho.
Duruusta lagu qaatay tababarkan, ayaa ka koobnayd khudbado iyo casharo laylis oo si gaar ah loo qaadanayey.
Qaabka duruustu u dhignayd, ayaa ahaa mid qoraal ah iyo mid gacanta laga qabanayeyba, waxana ku jiray casharo lagu qaadanayey sida loo garto iyo sida looga feejignaado noocyadda kala duwan ee qaraxa gacan kusamayska ah, gargaarka degdega ah, aqoonsiga dabinadda qaabaysan, habka wax loo raadiyo, Ilaalinta goobta fal-dambiyeed ka dhacay iyo sida loo joojiyo & xirfada baarista baabuurta. Duruustan waxay ka mid ahaayeen kuwo ay si wadajir ah isugu raaceen Somalida ka qaybqaadatay tababarkan, iyadoo tixgelin weyn la siiyey waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay la kulmaan hawl-maalmoodkooda.
Korneyl Van Dijk oo ah sarkaal EUCAP Somalia u qaabilsan qaybta hawlaha tababarada, la-taliye sarre booliska Bence Balassa iyo la-taliye Daniela Miteva, ayaa bixinayey casharadda lagu tababarayey saraakiishan Somaaliyeed, waxana sidoo kale tababarka la daadihinayey shaqaalle ka socday AMISOM.
Saraakiisha ciidamada Bileyska Somaliya ee ka qaybgalay tababarka ayaa ka kala socday waaxo kala duwan, sida INTERPOL, waaxda baadhida dambiyadda, waaxda soo saarista iyo burburinta waxyaabaha qarxa, unugta bileyska badda, unugta Ciidanka Ilaalada wadooyinka iyo waaxda caafimaadka.
“Waxba ha taaban marka aad gaadho goobta fal-dambiyeedku ka dhacay (…) Waxa kale oo aad u baahan tahay inaad dib u celiso dadka imanaya goobta, sida siyaasiyiin, saxaafadda iyo qaraabadda cida dhibanaha ah (…) Waxaad shaqada ka bilaabaysaa inaad sawiro ka qaado dhammaan muqaalka goobta, haddana ka qaad sawiro adiga oo ku dhawaanaya goobta” waxa sharaxaadaas bixiyey Baadhe Roger Apio ka socday unugta bileyska ee AMISOM, kana mid ahaa khuburada bixinaysay tababarka, khamiistii hore, mar uu casharkan u dhigayey saraakiil Ciidanka bileyska Soomaliyeed ah, kahor inta aanu u dirin inay ka shaqeeyaan sida ay ula macaamilayaan goob fal-dambiyeed ka dhacay oo la xidhiidha dil.
“Waxaan garanayey in badanka duruusta aanu wax ka taabanay xilligii uu tababarku socday ay yihiin kuwo si toos ah ula xidhiidha marka loo eego shaqada aan ka hayo INTERPOL, si kastaba ha ahaatee hadda waxaan garanayaa sida aan tababar u siin karo shaqaalaha aanu wada shaqeyno. Isla marka aan dhammaysto waxaan diyaarin doonaa inaan bixiyo koorso ii gaar ah iyo in ay fure ii noqon doonaan casharada aanu halka ku qaadanay” sidaa waxa yidhi Ayub, oo ah 27 ka tirsan qaybta bileyska Somalida ka shaqeeya INTERPOL. Ayub ayaa dib ugu noqday dalka Somalia, isagoo ka soo diga-rogtay magaaladda London ee dalka UK, oo ahayd halkii uu ku koray. Wuxuu kuliyadda Waltham Forest ee London ka bartay culuunta ganacsiga. Wuxuu qaatay go’aan ah inuu dib ugu laabto Somalia isagoo doonayey in “cilmiga uu bartay iyo waayo-aragnimadiisa u la tago” dalkiisa. Sarkaalkan da’da yar ee Soomaliyeed ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay la shaqeynta shaqaallaha caalamiga ah ee ay wadashaqeeyaan. Waxaanu si gaar ah u xusay shaqada maalinlaha ah ee qabtaan hawl-galka INTERPOL ee magaaladda Muqdisho.
“Tababarka tababarayaasha ee sidan oo kale ah in la sameeyaa, waa mid markasta leh ku dhiirasho xiiso badan. Waana hab ku salaysan waxbarasho laba dhinac ah oo xoogan iyo iyadoo muhiim u ah dareenka lahaansho ee guddaha iyo aragtida mustaqbal ee xirfada Ciidanka xoogga bileyska Somaaliyeed.” Sidaa waxa yidhi la-taliye sarre bileys Bence Balassa oo ka socday EUCAP Somalia.
“Dhinacayga, natiijadda ugu qiimaha badan ee ka soo baxday tababarakan ayaa ahayd inaan arkayey kala duwanaanshaha dadka iyo dhinaca da’da, meelaha ay ka soo kala jeedaan iyo waayo-aragnimada, marka la iska dhaafo dhammaan kala duwanaanshaha, wada fadhiisiga iyo mid ahaanshaha in la fuliyo awoooda sharci, dhismaha xidhiidhkooda iyo isku-dhafka qorsheynta hawlaha mustaqbalka la qaban doono oo ah in la helo Somaliya oo nabad ah”, sidaa waxa tidhi la-taliyaha bileyska EUCAP Somalia Daniela Miteva.
Kadib gunaanadkii iyo gebagebadii hawlaha tababarka, ayaa waxa xigay xafkadii xidhitaanka oo ka dhacday Akaadamiyadda Bileyska Muqdisho 31-kii bishii March. Hoggamiyaha hawlgalka EUCAP Somalia Maria-Cristina Stepanescu iyo Janaraalka u sareeya Ciidanka xoogga bileyska Somalia Janaraal Bashiir ayaa ka qaybqaatay xafladda, halkaas oo ka qaybgalayaashii tababarka lagu guddoonsiiyey shahaadooyin. “Waxaan qirayaa inaan halka ka sheego sida guusha ah ee tababarkan u hirgalay, iyadoo ujeedadu tahay sidii kor loogu qaadi lahaa awooda Ciidamada Bileysku ugu gudan lahaayeen waajibaadkooda maalinlaha ah, iyadoon loo eegayn caqabadda iyo khataraha jira”, sidaas ayey tidhi Ms Stepanescu oo hadalkan ka jeedisay saaxiibada ay wada shaqeeyaan iyo ka qaybqaatayaashii tababarkaba. Sidoo kale Janaraal Bashiir ayaa isaguna muujiyey sida uu ugu bogay duruusta halkan lagu qaatay iyo isagoo uga mahadceliyey wadashqeynta ay la leeyihiin EU-da iyo bulshada caalamkaba.